हुन नसकेको खर्च - परिहास - नेपाल
हुन नसकेको खर्च
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि सरकारको आलोचना भएको छ । आलोचनाको विषय भने उही, सरकारले पैसा खर्च गर्न सकेन । आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक पनि सकियो । तर खर्च गर्ने सरकारको शैली भने उही । तेस्रो चौमासिक सकिसक्दा पनि आधा बजेट खर्च भएको छैन । यो तालले मुलुक कसरी समृद्ध बन्छ ? सरकारले पैसा खर्च गर्न नसकेको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विश्लेषकहरु भनिरहेका छन्, आखिर दुई तिहाइ भए पनि सरकारको तालचाहिँ उही रहेछ ।
अहँ ! सुध्रनेवाला छैन ।
खर्चको यथार्थ यही हो । तर यो बाह्य यथार्थ मात्रै भयो । आन्तरिक यथार्थ अर्कै छ । सरकारले पैसा खर्च गर्न नसकेको यथार्थ हो । तर यसमा सरकारलाई मात्रै दोष दिन भने मिल्दैन । किनभने सरकारले खर्चै गर्न नसकेको त कहाँ हो र ! अब खर्चै गर्न दिँदैनन् त कसको के लाग्छ ?
केही अघिको मात्रै कुरा हो, राष्ट्रपतिका लागि एउटा चिल्लो गाडी खरिद गर्न सरकारले १८ करोड खर्च गर्न लागेको थियो । तर संसद्ले रोकिदियो । खर्च गर्न पाएन ।
सरकारले प्रहरीका लागि हेलिकप्टर खरिद गरी अर्को केही करोड खर्चिने तयारी गरेको थियो, पछि त्यसमा पनि रोक लाग्यो । खर्च हुन सकेन ।
केही महिनाअघिसम्म बालुवाटारमा दिनदिनै भोजभतेर आयोजना हुने गथ्र्यो । त्यसमा पनि पैसा त मजाले खर्च भइरहेकै थियो । तर विपक्षीको विरोधले गर्दा त्यो पनि बन्द भयो ।
नेताहरु बिरामी भए विदेशमा उपचार गर्ने खर्च सरकारले नै दिने गथ्र्यो । त्यसमा पनि राज्यको अथाह बजेट बिनाअवरोध खर्च भइरहेकै थियो । पछि त्यसमा पनि प्रतिबन्ध लाग्यो ।
अब खर्च गर्ने सम्पूर्ण बाटा यसरी एकपछि अर्को बन्द गरिदिएपछि बजेट कसरी सकिन्छ ? खर्चको बाटो आफैँ बन्द गर्ने अनि सरकारले खर्चै गर्न सकेन भनेर पनि आफैँ भन्ने ? यो कुरा अलि हजम भएन कि !